Ukunakekelwa Kwamuntu Kwabesilisa | Amadoda aSitayela
Ayanda amadoda aqala ukuzinakekela ngendlela enkulu, kungaba ngokusebenzisa okhilimu, ukwenza izindlela zokwelapha ezahlukahlukene noma nokuhlinzwa okuhlukile. Thola ifayela le- amathiphu amahle kakhulu okunakekelwa komuntu siqu Akuwona umsebenzi olula kepha lapha ungathola okuningi okuhle kakhulu ozokuthola enetheni nokuthi ungakusebenzisa ngokuhamba kwesikhathi.
Thola umhlaba omusha ukuze zinakekele futhi uzigcine umncane futhi umuhle ukudlala umdlalo omuhle wokuguga futhi uma usumncane vele, zisebenzise lezi zeluleko zokuzinakekela ngendlela engcono kakhulu.
Por U-Alicia tomero kwenza 1 usuku .
Ngabe ubulokhu ubona ukuthi ubudlelwano benu abusebenzi kahle isikhathi eside? Ingabe liyawohloka futhi awukwazi ukuthola izimbangela? Mhlawumbe umlingani wakho...
Yini ehlanganisa indoda emfazini
Por U-Alicia tomero kwenza Izinsuku ze-3 .
Uyafuna ukwazi ukuthi ungayenza kanjani indoda ithandane nowesifazane? Yize kubonakala kulula kodwa baningi abantu besifazane abanga...
Kungani izinwele zikhula emhlane nokuthi zingasuswa kanjani
Por U-Alicia tomero kwenza Izinsuku ze-6 .
I-canons yobuhle emadodeni iya ngokuya ilungiswa ukuze ihambisane nemithetho eqinile ngodaba lwezinwele ...
Ingabe ukuba nezintambo zezicathulo kuwuphawu oluhle?
Por U-Alicia tomero kwenza Amaviki angu-2 .
Uma sizijwayeza ezemidlalo ngezikhathi ezithile noma njalo, ngesinye isikhathi singase sibe nobuhlungu bemisipha bomsuka...
Indlela yokugqoka enhle ngaphandle kwesudi uma uyindoda
Por U-Alicia tomero kwenza Amaviki angu-3 .
Ungakwazi yini ukugqoka kahle futhi ungagqoki isudi? Inikeza umbono wokuthi uma ungagqokile isudi futhi…
Imfashini yamadoda aneminyaka engu-60 ubudala
Por U-Alicia tomero kwenza Amaviki angu-4 .
Akukho okubi ngokugqoka okuhlakaniphile nesitayela kuma-60. Kukhona ukuvuthwa kukho konke...
Ungakushintsha kanjani ukubukeka kwakho uma uyindoda
Por U-Ignacio Sala kwenza Amaviki angu-4 .
Ukushintsha ukubukeka kwakho uma uyindoda akulula. Yize abesifazane bengenankinga uma kukhulunywa…
Ijeans elingana kahle nendoda
Ukuba nekhono lokudala umfana wezinkomo futhi alenze lilingane nawo wonke amadoda kungaba isimangaliso….
Izingubo zokuya ejimini
Abaningi bangabasebenzisi abazibuza ukuthi yiziphi izingubo ezingcono kakhulu zokuya ejimini. Uma uyi…
Kuthatha isikhathi esingakanani ukukhulisa intshebe
Por U-Alicia tomero kwenza Inyanga e-1 .
Ukuvumela intshebe yakho ikhule kuyisiphakamiso esiphumelele kakhulu kunoma iyiphi iminyaka. Inkinga ingase ivele uma kungokokuqala...
Ikhula kanjani intshebe lapho ingaphumi khona
Ukuvumela intshebe yakho ikhule futhi uyigcine ijiyile kungaba yinto elula futhi ewujuqu. Kodwa amadoda amaningi ayadlula kuleli qiniso...
Ingabe unezinduna emhlane wakho?
Intshebe Yezinsuku Ezintathu - Amaphutha Okufanele Uwagweme
Umkhuba Wemfashini: I-Hipster Beard
Uhlobo lwentshebe ngokobuso bakho
Izintshebe: Ungawuthola kanjani umugqa ophelele wesihlathi
Izinwele ezinhle kakhulu zamadoda anobuso obuyindilinga
Imikhiqizo emine ebalulekile yamadoda anezinwele ezinhle
Amathiphu wokushaya induna lapho usumdala
Senzani ngezinwele zangaphansi?